13/01/2016 – Gentleman Magazine
ပုံစံ ၄၅ မြိုး ထဲမှ ပထမပိုငျး ၁၀ မြိုး ပုံစံ ၄၅ မျိုး ထဲမှ ပထမပိုင်း ၁၀ မျိုး သင် သိတဲ့၊ အခု စဉ်းစားလိုက်ရင် ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့Sex Position တွေကို ပြောပြကြည့်ပါ။ Missionary, Cowgirl, Spooning, Doggy.. ပြီးတော့ ဘာကျန်သေးလဲ??
ဘဝမှာ အောငျမွငျဖို့ ရှောငျကဉျြရမယျ့ အရာ ၁၀ မြိုး အမျိုးသားတို့ ဘ၀မှာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ(၁၀) မျိုး တခြားသူတွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ပေးခြင်းဟာ သင် ကိုယ်တိုင်ကိုလဲ အောင်မြင်စေပါတယ်။ သင် လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာကတော့ ၁. တခြားသူတွေရဲ့ အချိန်ကို မဖြုန်းပါနဲ့
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျစဉျ ခန်ဓာကိုယျတှငျ ဖွဈပကျြနိုငျသော ဝဒေနာဆိုး ၈ မြိုး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဖြစ်ပျက်နိုင်သော ဝေဒနာဆိုး ၈ မျိုး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ချွေးထွက်မှာ၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲမှာ၊ ပင်ပန်းမှာကို တွက်ထားပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် နချို့ မျှော်မှန်းမထားတဲ့ ဝေဒနာတွေလဲ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒိအထဲက